Iintlola zaseRussia ezinokuthi ziqhubeke nohlaselo lwabanqolobi phantsi kweflegi yobuxoki - Ezopolitiko
Eyona Ezopolitiko EMoscow, awusekho mda phakathi kweentlola, ukuxoka kunye nabanqolobi
EMoscow, awusekho mda phakathi kweentlola, ukuxoka kunye nabanqolobi
Umongameli waseRussia uVladimir Putin.I-MAXIM MARMUR / AFP / imifanekiso kaFetty
Kule mihla akukho xesha linokubakho lokutsala umphetho wenathi kuneflegi yobuxoki. Ukuyicacisa yindlela eqinisekileyo yomlilo yokuhlanganisa ii-monomaniacs ezikwi-Intanethi ezikholelwa ukuba akukho nto ehlabathini njengoko ibonakala injalo. Inkolelo yokuba amandla emfihlelo angathandekiyo atsala imitya emva kweziganeko zezinye njengeziyobisi njengeopioids.
Oku kubi, kuba iflegi yobuxoki ligama elisemthethweni kwihlabathi le-espionage, kwaye kukude nokutsha. Iintlola zizenze mntu wumbi ngexesha lokusebenza kwabo ngokufihlakeleyo okoko bekukho iintlola. Kwiimeko ezigabadeleyo, iinkonzo zobuntlola benze uhlaselo lwabanqolobi phantsi kweflegi engeyonyani ukugcoba abachasi kunye nokukhohlisa uluntu. Iimeko ezinjalo, ngelixa zinqabile, ziyenzeka.
Bhalisela iNcwadana yezepolitiki yaBakhangeli
Zisenzeka nanamhlanje. Ixesha elifanelekileyo, ezi ziganeko zibandakanya abantu baseRussia, kuba i-Kremlin yagqibezela obu bugcisa bumnyama ngaphezu kwenkulungwane eyadlulayo, xa abaphembeleli abaziingcali yaqhuba ingxaki yobunqolobi yatsar egazini emhlabeni. Ityala lakutshanje lobugrogrisi bobuxoki libonisa ukuba akukho nto ingako itshintshileyo kule minyaka ili-120 idlulileyo.
Nge-4 kaFebruwari, i-2018, abahlaseli abangaziwayo-baqhushumisa umlilo kwiziko lenkcubeko laseHungary e-Uzhhorod, ikomkhulu lommandla osentshona weUkraine. Akubangakho bantu benzakeleyo, kodwa uhlaselo lwaphakamisa amaxhala phakathi kwama-100,000 abantu baseHungary abahlala e-Uzhhorod, kumda weHungary, ilizwe lokuzalwa kwabo. Ubume begcuntswana laseHungary laseUkraine libe ngumcimbi oshushu phakathi kweKiev neBudapest, kunye nesiganeko sobunqolobi yenze imeko echukumisayo kakubi.
Zisuka nje, Ama-mavens okhuseleko eUkraine anuka impuku . Ukusukela oko iRussia yabayo iCrimea kwaye yaqala imfazwe yayo eyayingaqinisekanga kwilizwe labo kwiminyaka emihlanu edlulileyo kule nyanga, iUkraine yahlaselwa ngamaza e-Russian espionage, propaganda kunye kwanobugrogrisi obenzelwe ukungazinzisi ilizwe . Uluvo lokuba iMoscow yayiza kubandakanyeka kuhlaselo lweflegi lobuxoki kumhlaba waseUkraine yavela nantoni na ingekhoyo eKiev.
Kungekudala, abathathu basePoland abanamalungelo bavalelwa uhlaselo lwe-Uzhhorod, uphuhliso olungothusiyo, ngokunikwa irekhodi laseKremlin lokusebenzisa iintloko zasePoland ukuphazamisa iUkraine-kwaye ngokuchaseneyo-njengoko bendikhe ndacacisa ngaphambili. Inkqubo ye- abarhanelwa yayiloluhlobo lwabaphembeleli basekunene abakrokrayo abaqeshwe bubukrelekrele baseRussia kumazwe amaninzi aseYurophu njengezithuthi ze-espionage kunye nokubi.
Ilungelo elikhulu lasePoland kodwa elisezantsi kwezopolitiko lisekuhleni nguRussophile-ongazange abe ngumbono ophakathi kweePolisi-kwaye akazami nzima ukufihla unxibelelwano lwaseKremlin. Ngokuqhelekileyo yimeko kaMateusz Piskorski, olwela amalungelo abantu ekunene kangangeminyaka othathe indawo engacacanga eMoscow, ethanda ukuhlala eWarsaw. I-Piskorski's ebullient siding neRussia kwi-aggression yayo e-Ukraine yayiyinto exeliweyo, edityaniswa kukuvela kwakhe rhoqo kwiindawo zentengiso ze-Kremlin, kubandakanya utyelelo lwaseCrimea. IPiskoski iyangcatsha iprofayile yesiqhelo : i-neo-Nazi manqué enengqondo ekhulisa uthando ngo-Aleksandr Dugin, i-ambassador enkulu yase-Kremlin ukuya ngasekunene, emva koko uphefumla ebhedini kunye neMoscow. NgoMeyi 2016, abasemagunyeni ePoland wamgcina ngezityholo zokusebenzela ubukrelekrele baseRussia nxamnye nePoland.
Imisebenzi efihlakeleyo kaPiskorski isemaphethelweni kwetyala lase-Uzhhorod, eliqale kwinyanga ephelileyo eKraków. Iipali ezintathu eziphambi kwenkundla zijongene nezityholo ezinxulumene nobunqolobi ezinokuthi zikhokelele kwisigwebo sentolongo. Izinto zanomdla ngokukhawuleza xa omnye wabathathu abatyholwa ngokuqhushumba umlilo, uMichał Prokopowicz, ukucofa umntu lowo Uqinisekisile ukuba uyalele kwaye waxhasa ngemali kuhlaselo lwe-Uzhhorod.
UProkopowicz ubanga ukuba uhlawulwe i-1,500 ye-euro ngumhlobo kunye neqabane likaPisorski, ilizwe laseJamani eligama linguManuel Ochsenreiter. Elo gama liza kuqhelana nababukeli bemeko yeJamani ye-fascistoid, kuba i-Ochsenreiter kangangeminyaka ibiyinto ephambili kwi-Central Y-pro-Kremlin yephiko lasekunene kunye nento ye-gadfly yemidiya.
Nangona u-Ochsenreiter elumke engazibandakanyi kakhulu izimvo zamaNazi, ezingekho mthethweni eJamani, umbono wakhe usondele kubuNazi. Unonxibelelwano lwasesidlangalaleni nalo lonke uluhlu lwabantu baseRussia abasekunene, kubandakanya neDugin ekuyo yonke indawo, kwaye usebenze kuKatehon, itanki lokucinga elinephiko lasekunene ( hayi ngaphezulu kwewebhusayithi ngokwenyani) enelinki kubukrelekrele baseRussia. Ngaphezulu kwako konke, iminyaka i-Ochsenreiter ubuso obuqhelekileyo eRashiya namhlanje (okoko baphinde babizwa njenge-RT), besebenza njengabafana babo kwimicimbi yaseJamani. Into enenkwenkwezi kwizixhobo ze-Kremlin ze-propaganda, emehlweni e-Ochsenreiter yaseNtshona ubuncinci Ummeli wempembelelo yobukrelekrele baseRussia.
Uvavanyo lwe-Uzhhorod lutyhila ukuba angangaphezulu koko. Njengoko ilungelo laseJamani libone ubutyebi balo bezopolitiko bunyuka, buqulethwe kwi-Alternative for Germany (AfD), ngoku lelona qela lesithathu ngobukhulu kwipalamente yaseBerlin, i-Ochsenreiter yangena ngakubantu abaqhelekileyo. Ngexesha lokuhlaselwa kwe-Uzhhorod, wayesebenza kuMarkus Frohnmaier, ipalamente ye-AfD kwaye lelinye lawona mazwi anamandla kaRussophile kwiqela elalixhasa iMoscow.
Frohnmaier Uthethe ethethelela umntu asebenza naye ngoku , okhanyele nabuphi na ubugwenxa. Nangona kunjalo, ubungqina obutsha Kuvele ukuba i-Ochsenreiter iyayazi iProkopowicz ukusukela ngo-2015, kwaye la madoda mabini ayenjalo ukunxibelelana ngemiyalezo ebhaliweyo Ngelixa le yokugqibela inike ingxelo eneenkcukacha zenkxaso mali yeOchsenreiter kunye nesicwangciso sokusebenza kwebombhombu eUzhhorod. Ubukrelekrele basePoland Kuxelwe ukuba nayo yonke imiyalezo ebhaliweyo phakathi kwe-Ochsenreiter kunye neProkopowicz ngaphambi nasemva kohlaselo lobunqolobi, kwaye banikezela ubungqina obucacileyo bendima yaseJamani emva kwesi sehlo.
Ityala laseKraków liza kuphinda liqale ngo-Matshi, kwaye nangona u-Ochsenreiter engekabekwa tyala ngolwaphulo-mthetho, oko kungatshintsha. Nokuba kunjalo, kufanelekile ukubuza ukuba kuqhubeka ntoni apha, xa unikwa eyaseJamani indima yoluntu njenge-propaganda yaseKremlin. Ngelixa kungenakugwetywa ukuba i-Ochsenreiter yayizenzela ngokwayo, mhlawumbi ifuna ukwenziwa i-Kremlin, kufanele kuqatshelwe ukuba ubukrelekrele baseRussia buyayithandisa inkululeko, ngakumbi xa ibandakanya ubugrogrisi. Kubonakala kunokwenzeka ukuba umntu uxelele u-Ochsenreiter ukuba enze uhlaselo lwe-Uzhhorod lwenzeke-kwaye wayihlawula.
Ngubani oma ngasemva kwesithunzi esine-4 kaFebruwari, uhlaselo lwe-2018 ngumbuzo abasemagunyeni ePoland naseUkraine abanomdla wokusombulula. Impendulo isenokungayakhi iMoscow okanye iBerlin, ngelixa i-AfD kufuneka ibuzwe kwirekhodi ukuba buyintoni ubudlelwane bayo neKremlin. Imibuzo ekhathazayo yolula ngaphaya kweJamani apha, inikwe amaqhina e-Ochsenreiter kuma-activist asekunene kumazwe amaninzi aseNtshona, kubandakanya iUnited States .
Phantsi kukaVladimir Putin, iMoscow iqokelele umkhosi wabasasazi bamanye amazwe abazimiseleyo ukwenza isicelo sikaKremlin, besasaza ulwazi olungelulo oluyilelwe ukuba luphembelele abaphulaphuli baseNtshona. Akukho nto intsha apha, kuqeshwe iintlola zaseRussia amanyathelo asebenzayo ngokuchasene neNtshona kangangekhulu leminyaka, kodwa ukuba eli qela lamaxoki ngoku libandakanya abanqolobi, njengoko ityala lase-Uzhhorod libonisa njalo, yile nto onke amazwe aseNtshona kufuneka azikhathaze ngayo.
URyan Gosling Akasoze Awube Umboniso-kwaye yiyo loo nto eyiyeyona Nxalenye ibalaseleyo 'yoMntu wokuqala'
Ukuphazamiseka kwiPecking: AmaLungelo oLuntu lwezeNtlalontle aMkile
UHenry Cavill uthi 'Umsebenzi wakhe: Akunakwenzeka-Ukuwa' Ukulwa kwegumbi lokuhlambela kwakubuhlungu kakhulu
izangoma iqhude ludlolo
I-Netflix haunting ye-bly manor
Ufe njani billy graham
Eyona testosterone ikhuthazayo ine-estrogen blocker
Hillary Clinton kwiRobert Byrd